I-Cochran Cove Jackson Lake House. I-Sunset View Enhle - I-Airbnb
I-Cochran Cove Jackson Lake House. I-Sunset View Enhle
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Kyleigh
U-Kyleigh Ungumbungazi ovelele
Izwe elihlala echibini, igumbi lokulala le-3, okugeza oku-2, ikhaya elinezindaba ezi-2 eLake Jackson elinokufinyelela kwamanzi. Izindawo zokuhlala ezinkulu ezivulekile kuzo zombili izitezi, ikhishi elivuselelwe elinokubukwa okuhle kokushona kwelanga emanzini. Isikrini esiyisicaba se-smart TV's, isidlali se-DVD, i-USB plug outlets. Izikhala ezingaphandle ezibanzi ezihlanganisa umpheme, i-patio ene-charcoal grill kanye ne-gazebo. Iphupho likaFisherman lihlala ihora elingu-1 kuphela ukusuka e-Atlanta, izilwane ezifuywayo zamukelekile, i-kayak etholakalayo ukusetshenziswa, ukupaka izimoto ezi-3, ikhaya elingabhemi. Buza mayelana nezaphulelo zokuqasha zesikhathi eside.
Ikhaya lethu linethezekile futhi linethezekile, simema umndeni wakho, abangani, izingane ngisho nomdlwane wakho ukuthi uthathe ikhefu edolobheni futhi wehlise ijubane emanzini. Sicela uqaphele amaphuzu ambalwa, izilwane ezifuywayo zamukelekile kodwa igceke lethu alibiyelwanga, isevisi yomakhalekhukhwini ikhawulelwe kwezinye izinkampani zenethiwekhi (i-att) kodwa ingcono kwabanye (i-verizon, i-tmobile) futhi i-wifi yethu cishe ayifani nejubane onayo ekhaya. Sinenqwaba yemidlalo, izincwadi, izindida namamuvi ukuze uhlale ujabulile, kodwa sikukhuthaza ukuthi ulijabulele leli chibi nakho konke elikunikezayo.
I-Lake Jackson iyindawo ejabulisayo yokuzilibazisa futhi uphumule noma uvule umculo futhi uthole i-cove elungile yokuzijabulisa nabangani noma ukubuka ikhonsathi yangaphambili yamanzi. Ikhaya lethu lisemgwaqweni owubhuqu nomakhelwane abanobungane, eduze nendawo yokuqashwa kwezikebhe zaseReasor kanye neLake Daze. Umgodi wokunisela wendawo, u-Shawn O'briens ungamamayela angu-1.5 phezulu komgwaqo futhi unikeza ikhaya le-shuttle elihloniphekile.
Sitholakala imizuzu eyi-10 kuphela uma udinga okuthile mathupha, kodwa sitholakala kalula ngefoni noma ngombhalo. Sinekhiphedi yokuzihlola kalula futhi izokushiya ujabulele ichibi ngaphandle kokuphazamiseka. Omakhelwane banobungane futhi bangase beze bazoxoxa noma baze ngisho babelane ngamathiphu athile okudoba.
Sitholakala imizuzu eyi-10 kuphela uma udinga okuthile mathupha, kodwa sitholakala kalula ngefoni noma ngombhalo. Sinekhiphedi yokuzihlola kalula futhi izokushiya ujabulele ichibi…
UKyleigh Ungumbungazi ovelele